Ry governemanta vaovao o ireto misy Asa 7 miandry - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Lesona sarotra ho ahy tamin’izahay nianatra Tantara tao Ankatso ny momba ny tendrombohitra 12 niakaran’Andrianampoinimerina (1745-1810), sy ny nametrahany ny sasany tamin’ireo vadim-panjakana tao. Taty aoriana vao fantatro tamin’ny vaky boky, sy ny entimody, ary fanadihadiana sy fikarohana maro, fa fomba nentina nilaza ireo dingana maro (na 12) narahany hanorenana sy hanitàrana ny Fanjakana izany. Tsy raisina an-tendrony tsy akory.
Rentsika fa hoe nalefa nangoron’entana ny mpitondra ao Antananarivo ao. Tsy hay izay fahamarinany fa ny hitam-poko, hitam-pirenena dia mihatra aman’aina ny tsy fahombiazan’izy ireo. Mety hahafeno boky iray manontolo raha soratana. Kamo vavy sy kamo lahy anefa ny maro amintsika raha hamaky boky koa aleo ny mpandalina tantara no hanoratra izany ho an’ny taranaka any aoriana any.
Ireto manaraka ireto no heveriko fa olana na kirizy 12 izay mitaky vahaolana “maika” mandrapiandry izay boky izay. Tsy rahampitso, tsy afak’ampitso, na amin’ny herinandro na afaka iray volana, fa izao anio izao. Tsy vahaolana avy amin’ny fitondràna no andrasana fa avy amin’ny Malagasy izay niangaran’ny vintana ka afaka mamaky ity fanehoana ity.
Ny mosary no fahavalon’Andrianampoinimerina voalohany tamin’ny fanjakany. Dia mbola ny mosary na kere ao Ambovombe sy ny faritra manodidina azy no kirizy voalohany iainan’ny Malagasy amin’izao aogositra 2021 izao. Malagasy 1,1 tapitrisa no miaritra izany. Toy ny hoe ny mponina rehetra ao Antananarivo no mosarena avokoa. Mila omena sakafo maraina, omena sakafo atoandro, omena sakafo hariva. Ny marefo toy ny ankizy dia fahanana fa tsy mahavita tena intsony.
Ny mpamatsy vola vahiny izao no mivaky loha manao izany. Miampy ireo tsara sitrapo vahiny sy Malagasy ka isan’ireny ny Fiangonana katôlika, izay manao ny ainy tsy ho zavatra hanavotana izay mbola azo avotana.
Fantatra tsara ny vahaolana momba io mosary io. Mahafantatra izany ny teknisianina ao amin’ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana, ary ny mponina. Sy ireo mpikaroka Malagasy hafa koa, ary ny ONG Malagasy maro toy ny SAF FJKM. Olana azo vahana ao anatin’ny roa na telo taona ny mosary, hoy izy ireo.
Ny tsy fisian’ny hanin-ko hanina koa toy izany. Tratry ny fijanonan’ny fitomboana ny 75% ny ankizy malagasy latsaky ny dimy taona, tamin’ny taona 2019. Izany hoe zaza iray amin’ny roa. Azo vahana izao ankehitriny izao anefa io olana io. Fa raha misafidy ny tsy hanao na inona na inona ny Malagasy dia hitombo efatra hetsy (400 000) ny mosarena ao Ambovombe alohan’ny desambra 2021, hoy ny Firenena mikambana. Avo roa heny miohatra amin’ny isan’ny mponina ao Mahajanga.
Ny tazo no fahavalon’Andrianampoinimerina faharoa. Ny covid-19 kosa izy ankehitriny ho an’ny Malagasy. Mitovy amin’ny mosary ihany anefa izany. Izany hoe fantatra ny vahaolana: manao arovava sy orona faobe, sy fihibohana araka izay tratra ary indrindra indrindra ny manasa tànana amin’ny savony. Na ambanivolo na an-tanan-dehibe.
Ny “vaksiny” tsy mialon-jafy kosa no alaolana lavitr’ezaka. Tsy hanavahana karazana na saranga na fiaviana na firazànana. Fa asiana kosa laharam-pahamehana. Misy fomba tsara paika fametrahana lahara-pahamehana izay azo ifampizaràna avy amin’ny mpiombon’antoka iraisam-pirenena, sy ireo mpikatroka Malagasy efa eny an-tsehatra. “Mandrimandry manana aretina”, na ny mpitondra na ny maro an’isa manoloana ity covid-19 ity. Toa mihantsy fahafatesana aza. Sa izay ilay hoe « ny maty aza te ho maro! » Vitsy ireo miaro ny tenany. Ampirisihana ianareo ireny hanohy izany.
Ny tsy fisian’ny fandriampahalemana no fahavalo fahatelon’Andrinampoinimerina. Dia mbola izany koa no iainana amin’izao taona 2021. Ny omaly tsy miova. Hatrany an-tseranana aza tongan’ny « mpanendaka avo lenta », izay naka ireo fanafody iray kaontenera, « tsy nisy nahita » raha tsy efa dila tanteraka! Jamba daholo ve izany ny mpiasa ao? Sy ny olona amin’ny lalam-pirenena fahafito?
Rahefa milamina tsara ny tany, samy afaka miavotena ampilaminana ny rehetra. Sy ny tsirairay koa. Nofy izany amin’izao.
Andraikitra voalohan’ny olomboafidy rehetra ny fandriampahalemana. Avy eo ny fitsaràna, ny atitany, ny zandarimaria, ny pôlisy, ny miaramila, sy ny ministeran’ny fanajariana ny tany, miaraka. Ny mitory na milaza ireo tranga tsy mety sy mampiahiahy rehetra no anjaran’ny tsirairay.
Ny kirizin’angovo na hery enti-mamokatra no faha-efatra mitaky alaolana. Ny fahafahana na fahalalahana no hery voalohany amin’izany. Ny olon’afaka sy malalaka ara-tsaina sy ara-panahy ary ara-potokevitra ka tsy mahatahotry ny famoretana, no afaka hampivelatra ny talenta ananany. Isan’ny angovo koa ny fahalalahana misafidy izay sehatra tiana hamokarana, sy manatanteraka ny tetikasa tiana hatao.
Ny vola no angovo faharoa ilaina amin’ny famokarana harena sy fihariana. Ny findramam-bola malalaka sy tsy voageja no dingana voalohany amin’izany. Ho an’olontsotra, sy ho an’ny mpandraharaha. Io no mampiroborobo ny fihariana any amin’ny firenena efa mandroso rehetra, tsy anavahana. Manampy betsaka koa ny isam-batan’olona ny findramam-bola.
Ny jiro sy ny herinaratra no kirizin’angovo ilaim-baliny maika koa izao. Iray taona na 12 volana na roa taona vao mety ho voavàha “tsara” ny olana misy ankehitriny. Tsy miverina intsony ity nofy ratsy ity aorian’izay. Ny manitatra ny jiro sy ny hazavàna eny ambanivolo rehetra eny no hatao sy hotohizana. Latsaky ny 10% ny tokantrano malagasy no mampiasa herinaratra. Azo hakarina 50% izany ao anatin’ny dimy taona raha manomboka dieny izao.
Ny fifamoivozana malalaka sy mirindra manerana an’i Madagasikara no kirizy fahadimy azo hitondrana alaolana avy hatrany. Tsy vitan’ny sarety sy posy sy taksibrosy sy taksibe intsony ny fifamoivozana. Manana jeografy Malagasy maro isika afaka mamolavola paikady momba izany.
Ao anatin’izay koa no famahoahana ny Internet manerana an’i Madagasikara. Resaka teknika izany ary efa fantatra ny zavatra tokony hatao rahefa misy ny fahafahana manao azy. Marobe ny tanora Malagasy mahafehy tsara ny resaka tambajotra. Hankinina amin’izy ireo ny firoboroany raha tiana ny handroso amin’io lafiny io.
Mila hatsaraina koa ny fomba fifandraisana sy firesaky ny samy Malagasy. Ny fahaiza-mihaino no fototr’izany. Manaraka izay ny fifanajàna. Fahatelo ny fanajana ny rafitra antanan-tohatra. Tsy eo amin’ny samy Malagasy rahateo no misy fisaraham-bazana. Ny fifangarihan’ny maro an’isa sahirana amin’ireo vitsy an’isa migoka ny harena rehetra ao no olana tsy maintsy hatrehana ao aoriana ao.
Ny kirizin’ny fanabeazana sy ny fianarana no faha-enina tsy maintsy atrehina. Vonona ny mpamatsy vola hanampy ka hampiverina an-tsekoly ny zaza Malagasy rehetra. An’alina izy ireo no nijanona tsy nianatra noho ny covid-19. Mpampianatra marobe koa no mila tohana. Tsy ho vita rahateo ny mamaha ny olana amin’ny fanabeazana raha tsy atao eo anivon’ny lahasa ny mpampianatra Malagasy rehetra. Toy izany koa ny sekoly tsy miankina rehetra. Mila averina malaky any ampianarana ny mpianatra sy ny mpampianatra. Tsy zava-tsarotra izany fa azo tontosaina avy hatrany.
Ny fametrahana ny tany tan-dalàna no lahasa fahafito. Samy manaja sy manatanteraka ny adidy sy andraikitra tandrify azy ny tsirairay, araka ny voafaritry ny lalàna, dia vita izany. Ny mpampianatra, mampianatra. Ny mpitsabo, mitsabo. Ny mpamboly, mamboly, sns. Tsy mifampisalovana andraikitra. Ny fitondrana no tsy maintsy tan-dalàna voalohany. Ny sarambaben’olona koa tsy maintsy miditra anaty fiaraha-monina misy fifehezana.
Tsy hotanisaiko eto avokoa akory ny lahasa 12 miandry. « Sao misy mangalatra », hoy ilay namana noresahako azy omaly. Fanafody iray kaontenera aza vitan’ny sasany ny mampanjavona azy! Tsy ferana koa ireo mety hanao « dika-mitovy ». Tsy noresahana ohatra ny fiarovana, ny fifandraisana ivelany, ny fitsinjaram-pahefana, ny fanajariana ny tany, sns. Ireo fito ireo no noresahana fa ireo no maika indrindra. Ny fito rahateo mitory hafenoana.
7 izay… ary ny hafa ?
Feno koa anefa ny kapoakan’ny Malagasy manoloana ny zava-misy ankehitriny. « Indroa nahita ny maizina toy ny tain’omby natsentsin-davaka » mantsy izy ireo niala an’i Manga avy eo niditra an’i Voasary.
Tsy nahita rijankevitra ara-tsiansa enti-manazava ny nahatonga izao kirizy iainantsika izao aho na nikaroka hatraiza aza. Ny tantaran’i Madagasikara no nahitàna fa rahefa nandresy ny mosary sy ny tazo ary ny fifandrafesana teo amin’ny ambanilanitra, Andrianampoinimerina ka nandry fahalemana ny tany. Nahazo. hery lehibe noho izany izy ka afaka nanomboka ny fanambarana ho iray ny Nosy manontolo. « Ny ranomasina no valam-parihiko », no tarigetrany.
« Vina » no fiteny ankehitriny. Ary samy nanao ny ainy tsy ho zavatra nanatanteraka izany araka izay tandrify azy ny rehetra. Ny fitarihana na leadership nampiasainy rahateo nifanentana tamin’ny fotoana nanjakany.
Inona kosa àry ny leadership ilaintsika ankehitriny hiatrehana ireo olana voalaza etsy ambony ireo? Nikaroka ny valin’izany no niverenako nianatra indray tao amin’ny Harvard Kennedy School for Government. Raha fehezina izay norantovina tao dia izao: « ampiharina avy hatrany izay nianarana ». Toy ny lalana « Antalaha mandeha Sambava, sady mandeha no manamboatra ».
Fehiny, ampy izay ny mitsetsetra manoloana ny kirizy. Ny alaolana rahateo misy. Toy izany koa ny enti-manana. « Ny manampy ny hafa hanatanteraka ny vina na ao anatin’ny aizina aza no atao hoe fitarihana na leadership ». Tsy efan’irery izany fa tsy maintsy mivondrona. Na olona dimy aza no manomboka dia afaka manova zavatra ao anatin’ny enim-bolana na iray taona. Afaka ny mitondra fiovana ianao.
Asa soratra nalaina tao amin'ny Fesiboky
Pratique politique : Un temps pour promettre, un temps pour réaliser - il y a 4 jours
Sexe et politique en France : Ces obsédés qui nous gouvernent - il y a 21 jours